Prof. A. Samater Oo Ka Muraaradilaacy Calanka Xisbiga Kulmiye ee Calamada Xisbiyada Ka Dhex Muuqdey | Gabiley News Online
Prof. A. Samater Oo Ka Muraaradilaacy Calanka Xisbiga Kulmiye ee Calamada Xisbiyada Ka Dhex Muuqdey
March 10, 2019 - Written by admin
)- Prof. Cabdi Ismaaciil Samater oo ka mid ahaa dadkii kasoo qaybgalay Shiweynihii Xisbiga tallada Jamhuuriyada Jabuuti Haye ee RRP, oo ka furmey Magaalo madaxda dalkaasi ayaa niyadjabkii ugu weynaa kale kulmey hoolkii Shirweynuhu ka socdey.
Prof. Cabdi waxa markuu hoolka shirku ka socdey uu soo galayba ishiisu ku dhacdey calanka Xisbu Xaakimka Jamhuuriyada Somaliland oo ka dhex muuqda halkii la dhigey calamada Xisbiyada lagu soo marti qaaday Shirweynaha Xisbiga RPP, waxaanu isagoon is ogeyn ku dhawaaqay mee calankii Soomaaliya. Prof oo hilmaamsan in shirku yahay kii xisbiga oo lagu soo martiqaaday uun xisbiyada siyaasiga ah ee ka jira dalalka Dunida qaarkood.
Sidoo kale waxa uu markuu isha lasii raacay arkay wasiirka arrimaha Guddaha Somaliland Md. Maxamed Kaahin Axmed, ahna gudoomiye-xigeenka 1aad ee xisbiga Kulmiye ka mid ah marti sharafta lagu soo casuumey shirweynaha Xisbiga RPP.
Haddaba dhacdadan uu kale kulmey Prof. Cabdi Ismaaciil Samater gudaha shirka ayaa waxay geyeynsiisey inuu qoomamo darteed meel kaligii fadhiisto isagoo wejigiisa cadho iyo niyadjab badan ka muuqdo.
Dhanka kalena Madaxweynaha Jamhuuriyada Jabuuti Md Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si niyadsami ah oo meeqaamkeedu sareeyo ku qaabiley wasiirka arrimaha guddaha ee JSL Md. Maxamed Kaahin Axmed oo uu kula kulmey guddaha shirka.